Itoobiya: Ururka IOM oo ku baaqay qaaraan loogu gargaarayo dadka tabaalaysan – Kasmo Newspaper
Itoobiya: Ururka IOM oo ku baaqay qaaraan loogu gargaarayo dadka tabaalaysan
Updated - March 26, 2018 8:00 am GMT
London (Kasmo), Ururka Caalamiga ah ee Muhaajiriinta IOM (International Organization for Migration) ayaa jeediyay Baaq lagu soo ururinayo qaaraan lacageed oo dhan $ 88,5 Malyuun oo Dollar, si loo gargaaro 1,7 malyuun oo ku barakacay gudaha Itoobiya.
Baaqaasi wuxuu qayb ka yahay hawlaha Ururkaasi ka fulinayo dhanka qorshaha HDRP (Ethiopian Humanitarian and Disaster Resilience Plan) oo ah gargaarka loo fidinayo muwaadiniinta Itoobia ee laga soo celiyay Sacuudiga iyo guud ahaan qaxootiga Gobolka Geeska Afrika.
Qiyaastii dad gaaraya 1,1 malyuun ayaa guryahoodii ka cararay colaado hubaysan dartood, gaar ahaan 857,000 waxay ku tabaalaysanyihiin xadka Gobollada Oromia iyo Somalida.
Ku dhowaad 500,000 oo kale waxay dagaannadoodii uga carareen masiibooyin cimilada la xiriira, halka 47,600 oo muhaajiriin Itoobiayn ah ku soo laabteen dalka, 87,000 oo qaxooti Soomaali iyo Sudan isugu jirana ku suganyihiin xilligaan Itoobiya.
Ujeeddada qorshahan waxaa kale oo ka mid ah sidii loo taageeri lahaa dhallinyarada, isla markaana Hay’adaha Addis Ababa loogu adkayn lahaa ka hortagista tahriibka dadka.
Agaasimaha hawlgallada iyo xaaladaha degdegga ah ee Ururka IOM, Maxamed Cabdikhayr, ayaa caddeeyay in ay lagama maarmaan tahay in dib u habayn lagu sameeyo qaabka Ururrada Aadamigu uga hawlgalaan dalka Itoobiya.
In kasta oo dhaqaalaha dalku si fiican u kobcayo, haddana sannadkii 2016 Itoobiya waxaa ku dhuftay abaarihii ugu xumaa, 50kii sano ee ugu dambaysay, kuwaas oo saameeyay dad gaaraya 10 malyuun oo qofood.
Saadaasha Xukuumadda iyo Qarammada Midoobay waxay qabtaa in sannadkaan 2018ka, dadka gargaarka u baahan doona gaarayaan 16,4 malyuun, sidoo kale Itoobiya waa dalka 2aad Afrika, tirada qaxootiga oo u dhiganta in ka badan 909,000.